KATHMANDUTemperature 9°CAir Quality42
भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा कसरी भड्कियो हिंसा ?
नागरिकता कानुनमा संशोधनपछि भारतमा भइरहेको के हो ? हामी तपाईँलाई बुझाउँदै छौँ ।
केएफसीले हालै आफ्ना संस्थापकको कृत्रिम मस्कट इन्स्टाग्राममार्फत सार्वजनिक गरेको छ । युवा पुस्तालाई रेस्टुराँमा आकषिर्त गर्न कोलोनेललाई नयाँ स्वरुपमा प्रस्तुत गरेको केएफसीको दाबी छ ।
बेलायतमा रोको नामक चार वर्षे कुकुरलाई लगातार बान्तापछि हतारहतार स्थानीय पशु अस्पताल पुर्याइयो । केही खान नमानेको उक्त कुकुरको एक्सरे गर्दा सानो आन्द्रामा चारकुने वस्तु अड्किएको भेटियो ।
कपालकै कारण मानिस बाटोमा हिँड्न छाडेर उनलाई घोरिएर हेर्न थाल्छन् । भाइरल हुने शिशु अस्ट्रेलियाको पर्थमा जन्मेका हुन् ।
एक बंगलादेशीले पहिलो सन्तानका रुपमा छोरा जन्माएको झन्डै एक महिनापछि जुम्ल्याहा सन्तान लाभ गरेकी छन् । परिवारमा नयाँ सदस्य आएका कारण तिम्ल्याहाकी आमा खुसी भए पनि अब बच्चाहरुलाई कसरी हुर्काउने भनेर चिन्तित छन् ।
उनले जलवायु परिवर्तनका सवालमा हजारौँ विद्यार्थीलाई स्कुल छाडेर यस विषयमा आवाज उराल्न प्रोत्साहन गर्दै आएकी छन् । यसको प्रभाव स्वीडेनमा मात्रै नभएर युरोपभरि पर्दैछ ।
पेरुको हुआन्चाक्वीटो- लास लामास ठाउँबाट ६ वर्षअघि कंकाल उत्खनन थालिएको थियो । ७ सय वर्गमिटर खन्दा केही कंकालमा कपासमा बेरिएको र केहीको अनुहारमा रातो रंग पोतिएको पाइएको छ । बालबालिकाको कंकाललाई समुद्रतर्फ र जनावरको कंकाललाई हिमालतिर फर्काइएको छ ।
उनी के मान्छिन् भने मौसमझैँ महिनावारी पनि महिला अंगमा हुने परिवर्तन हो । उनी थप्छिन्, 'समाजमा यसलाई घिनलाग्दो काम मानिए पनि यो वास्तविकता हो ।’ आफ्नै रगतसँग खेल्दा यसले आफूलाई झनै निकट पारेको उनी सुनाउँछिन् ।
एकपटक बिहे गर्दा त झमेला हुन्छ भने क्यालिफोर्नियाको जोडी केन्जी र टेलर तानिगुचीले १२ पटक बिहे गर्न भ्याए । त्यो पनि १२ देशमा महिनैपिच्छे ।
१५ वर्षयता हिटलरको अभिनय गर्दै आइरहेका निल १० मिनेट काम गरेबापत पाँच सय स्टर्लिङ पाउन्ड कमाउँछन् । धेरैजसो टेलिभिजन सो र फिल्ममा कमेडी भूमिका वहन गर्दै आएका उनलाई अनौठा–अनौठा कामको प्रस्ताव आउँछन् ।
हजारौँ चराको झुन्डले अमेरिकाको टेक्सासस्थित अस्टिनको मुख्य सडकलाई अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ । गत जनवरी २८ मा ती चरा भुरुरु उडेर सडकका रेलिङमा बसे र ट्राफिक खुल्नासाथ कोकोहोलो मच्चाउँदै गाडी आउजाउमा बाधा पुर्‍याए ।
फिनल्यान्डको फेजर बेकरीले फट्यांग्रोको पाउरोटी बेच्न थालेको छ । बेकरीले एक टुक्रा पाउरोटी बनाउन ७० वटा फट्यांग्रालाई पिस्दै आएको छ ।
‘क्याप्टेनको बिदाइ विशेष नै बनाउनुपर्ने थियो । अरुका लागि ऊ एउटा कुकुर थियो होला तर मेरा लागि सन्तान थियो । ऊ मेरो सबथोक थियो । उसलाई म जीवनभर सम्झिनेछु ।’–सासा स्माजिक
लोकतन्त्र मूलत: दलहरुले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो । तर हाल दलको दबदबा यति गहिर्‍याइएको छ क...
सात दशकयता बन्दै, बिग्रँदै र फेरि बन्दै गरेको लोकतन्त्रबारे #NepalMag विवेचना | प्रजातान्त...
यमन मानन्धरर कृष्ण प्रजापति